Istaraatijiyadaha Ugu Haboon ee Macaamiil Ugu Fiican Online | Martech Zone
Talaado, Disembar 29, 2015 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, ganacsi kasta wuxuu leeyahay albaab meerto ah oo macaamiisha ka mid ah oo imanaya ama tagaya. Dhammaanteen waan sameyn karnaa waxyaabo kordhiya haynta isla markaana yareynaya kharashyada iyo dadaallada dheeraadka ah ee la xiriira helitaanka macaamiil cusub, laakiin macaamiisha duugga ah wali way ka tagi doonaan sababo ka baxsan koontaroolkayaga.
ELIV8 waxay qaabeeysay mid kale oo gaar ah infographic oo leh 7 istiraatiijiyad helitaan wanaagsan si loo hubiyo in xeeladaha suuqgeynta ee internetka aad ugu shaqeyneyso si hufan.
Raadinta Dabiiciga ah wali waa muhiim. Ka faa'iideysiga istiraatiijiyado wax ku ool ah oo wax ku ool ah iyo ka-habeynta barnaamijkaaga iyo waxyaabahaagu waxay wadi karaan taraafikada cusub. Xaqiiqdii, 80% dadku way iska indhatiraan xayeysiinta lacagta la siiyay waxayna taa badalkeeda diirada saaraan natiijooyinka dabiiciga ah 75% dadka waligood dib umala wareegaan bogga koowaad ee natiijooyinka raadinta.
Dhisida Maamulka - Abuur oo dhiirrigeli waxyaabaha ka hela dib-u-xiriiriyeyaasha shabakadaha awoodda leh, macluumaadkaaga iyo websaydhkaaga ayaa heli doona qiimeynta mashiinka raadinta oo sareeya oo ka raadi booqdayaasha bogagga ku habboon ee adiga kugu xiraya. Awood u yeelashada maamulka waxay ku kordhin kartaa raadinta dabiiciga ah 250% bogga aad rabto.
Influencer Suuq - Hawlgeli saamileyaal horeyba u lahaa dhagaystayaasha aad rabto, ka dibna u adeegso dhagaystayaasha si aad u dhisto mid kuu gaar ah, waxaad ku heli kartaa macaamiil cusub xawaare hillaac ah. Celcelis ahaan, suuqgeynta saamaynta waxay u aragtaa 6-ilaa-1 kusoo noqoshada maalgashiga.
2-Gudbinta Dhinacyada ah - Ganacsiyada badankood, 65% ganacsiga cusub wuxuu ka yimaadaa tixraacyada macaamiisha. Tixraac 2-dhinac ah ayaa ah halka labada tixraac ee saaxiibkood lagu abaalmariyo kaqeybgalka. Dadku waxay 4X u badan tahay inay iibsadaan marka uu soo gudbiyo saaxiibkood.
Waxyaabaha Iib-Ku-saleysan - 61% dadku waxay yiraahdaan waxay u badan tahay inay wax ka iibsadaan nooc keena waxyaabaha. Markaad sameysid shaxanka, waraaqaha cadceedda, iyo fiidiyowyada ku kiciya booqdaha wicitaan-ku-dhaqaaq, waad kordhin doontaa iibka.
Email Marketing - $ 1 kasta oo lagu kharash gareeyo emaylka celcelis ahaan $ 44 ayaa la iswada gaarsiiyaa habka kobcinta hogaankaaga iyadoo la adeegsanayo emayl bartilmaameed ah si loo xoojiyo natiijooyinka soo iibsigaaga. Otomaatiga suuqgeyntu wuxuu kordhin karaa dakhliga 10% kaliya 6-9 bilood gudahood
Analytics - 50% ganacsiyada way ku adagtahay inay si toos ah ugu nisbeeyaan suuq geynta natiijooyinka dakhliga. Aqoonso kanaallada aad ku beddeleyso adoo isticmaalaya Analytics. Ma ahan ganacsiyada kufiican xooga muhiimada ay leedahay cabirida suuq geynta ROI.
Tags: Gudbinta 2-dhinac ahafkuAnalyticsmaamulid farshaxanhelitaanka macaamiishaEmail Marketingsuuqgeynta suuqgeyntaraadinta dabiiciga ahgudbintaiibka diirada saaray waxyaabahaSEO
30, 2015 at 6: 10 AM
Si xushmad leh ayaa loo sharraxay 7 istiraatiijiyadood ee suuqgeynta ugu wanaagsan ee macaamiisha si deg deg ah ku iibsata, tani waxay hubaal ka caawin doontaa ganacsigeygu inuu si wax ku ool ah u koro. Waad ku mahadsantahay qaybta.